Zana-Bohitra Palestiniana Vaovao Bab Al Shams Tafapetraka ao Jerosalema Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Zana-Bohitra Palestiniana Vaovao Bab Al Shams Tafapetraka ao Jerosalema Atsinanana	Voadika ny 13 Janoary 2013 3:10 GMT
Zarao: Anisan'ny hetsi-pijoroana ao Palestina ny nananganan'ny mpikatroka Palestiniana 250 ny fananganana zana-bohitra vaovao antsoina hoe Bab Al Shams na “Vavahadin'ny Masoandro”, anisan'ny tany ao atsinanan'i Jerosalema nobaboina ary voasokajin'ny fitondram-panjakana Isiraeliana ho anisan'ny “Area E1“.
Miorina ao amin'ny vakim-paritra “E1″ atsinanan'i Jerosalema ny zana-bohitra vao tafaorina #BabaAlshams, hoy ny siokan'i @_mahmoud
Nisy Fanambarana ho an'ny gazety navoakan'ny Vaomieram-pandrindrana ny Tolom-Bahoaka ao amin'ny habakany androany vao maraimbe, mamelabelatra ny antony mahatonga ny ny fananganana an'i Bab Al Shams. Hoy ry zareo ao anatin'ny fanambarana ho an'ny gazety:
Ampolony taona maro izay i Isiraely no nametraka no nanorina izay tiany teny an-kianja raha nangina ny fiaraha-monina iraisampirenena ho setrin'ireny fanitsakitsahana ireny. Tonga ny fotoana ankehitriny hanovana ny fitsipiky ny lalao, anjaranay indray no manorina eny an-kianja – eo amin'ny taninay.
Sarin'ny saina Palestiniana mihofahofa ao Bab Al Shams. Sary nozaina tao amin'ny Twitter avy amin'i @Lemapal
Ankoatra ny fanambarana tamin'ny gazety, nampiasa ny Twitter ny mpikatroka Palestiniana hanambaran-dry zareo ny hetsik'izy ireo, sy anomezany ny vaovao farany sy ny sary avy eny an-kianja.
Anisan'ny vitsy voalohany nanambara ny fijoroan'i Bab Al Shams ny mpikatroka Abir Kopty araka ny isiahany hoe:
Nahatsangana zana-bohitra #BabAlShams eo amin'ny tany Palestiniana sokajian'i Isiraely ho #E1 izahay vondrona Palestiniana lahy sy vavy.
Nohazavainy ihany koa:
Zana-bohitra vaovao i #BabAlShams, tsy hoe mamelona indray fa manamarika zavatra maro ka tafiditra amin'izany ny fiverenana amin'ny taninay.
Tranolay natsangana ao Bab Al Shams. Sary nozarain'i @AbirKopty ao amin'ny Twitter
Heverina ho fandraisana an-tanana voalohany ho setrin'ny fambaboan'ny tafika Isiraeliana ny tany Palestiniana ity hetsika ity, ary ny fanambarana fa io faritra io dia ho ao anatin'ny fanorena-trano Isiraeliana, izay tsy ara-dalàna eo anatrehan'ny lalàna iraisampirenena.
Manazava ilay Palestiniana Pal_1948 [ar]:
@Pal_1948: Nanambara ny hanangana trano fonenana sy efitra fandraisam-bahiny mitotaly 4000, ary faritr'orinasa ao amin'ny vakim-paritra [E1] ny governemanta Isiraeliana, izany no nananganan'ny tanora Palestiniana 300 ny zana-bohitr'i Bab Al Shams.
@Pal_1948: Tranolay 25 no tafatsagana hatreto, Miaraka amin'ny toera-pitsaboana, izay ahitana dokotera miandry raharaha ary ao anatin'ny ora vitsivitsy dia tranolay 50 no ho tatsangana.
Sarin'ny ao anatin'ny tranolaim-pitsaboana, nozarain'i @Tweet_Palestine ao amin'ny Twitter
Ora vitsy taorian'izany dia nanodidina ny toerana ny tafika Isiraeliana, nanakatona ny toera-pidirana mankao Bab Al Shams, ary nanolotra taratasim-pandroahana ara-panjakana tamin'ireo mpikatroka ny hiala ny zana-bohitra. Mahaliana fa namoaka didy fampiatoana ny fitsarana tampony Isiraeliana, izay nanambara fa tsy azo esorina ao anatin'ny 6 andro ilay zana-bohitra.
Nohazavain'i Fadi Arouri miaraka amin'ny sary ny filazam-pandroahana:
@farouri: Namoaka taratasim-pialàna, eo noho eo, ao amin'ny zana-bohitr'i Bab Alshams ny tafika Isiraeliana, na dia eo aza ny didin'ny Fitsarana Tampony mampiato ny fandroahana ao anatin'ny 6 andro.
Tsy gaga tamin'ny filazana nataon'ny Isiraeliana i Abir kopty ka nisioka:
Efa nivonona tamin'ny taratasim-pandroahana izahay ka niaraka tamin'ny fananganana an'i #BabAlShams ny nandehananay tany amin'ny fitsarana ka nahazoanay ny didy fampiatoana! Mampiasa ny fitaovan-dry zareo izahay.
Na teo aza ny filazam-pazndroahana avy amin'ny Isiraeliana sy ny toetr'andro mamanala dia nanapa-kevitra ny handany ny alina ao anaty tranolain'ny zana-bohitra vaovao ny mpikatroka Palestiniana. Araho ao amin'ny Twitter amin'ny alalan'ny tenifahatra #BabAlshams ny fanavaozam-baovao rehetra ahitanao ny fivoarany.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraOla Anan
Tantaran'ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana farany 21 ora izayLibanonaGV Face: Ny Zavatra Ilainao Fantarina Momba Ny Hetsi-panoherana Goavana “Maimbo Ianareo” Ao Libanona
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Ελληνικά, Français, Türkçe, Deutsch, srpski, English
Hafanàm-po an-tseraseraMediam-bahoakaPolitikaVaovao MafanaZon'olombelona